China Monitor Lithium Battery ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ - Hi-Chipcom
Toy Gun ဘက်ထရီ
စိတ်ကြိုက် POS ဘက်ထရီ
မိုဘိုင်း POS စက်ဘက်ထရီ
Smart Earbuds ဘက်ထရီ
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာဘက်ထရီ > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာတူရိယာဘက်ထရီ > လီသီယမ်ဓာတ်ခဲကိုစောင့်ကြည့်ပါ
iPhone 12 Pro ဘက်ထရီအသစ်
iPhone7Plus ဘက်ထရီအသစ်
OEM Long Life iPhone7Plus ဘက်ထရီ
OEM Long Life iPhone 12 Pro Max ဘက်ထရီ
iPhone ဘက်ထရီ အစားထိုးခြင်း။
၁။ စိတ်ကြိုက်အရွယ်အစား - အရွယ်အစားနှင့်စွမ်းရည်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။
2. အရည်အသွေးအာမခံချက် - UL1642 ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစံနှုန်းများအဖြစ်ယူခြင်း။ နှင့်အားလုံးထုတ်ကုန် 100% ချောထုတ်ကုန်စမ်းသပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထုတ်လုပ်မှုအနေဖြင့် Lithium Battery ကိုစောင့်ကြည့်ပေးပါမည်။ ငါတို့သည်သင်တို့ကိုအကောင်းဆုံးပြီးနောက်ရောင်းချမှုဝန်ဆောင်မှုနှင့်အချိန်မီပေးပို့လိမ့်မည်။
လီသီယမ်ဘက်ထရီပါ ၀ င်မှုကိုစစ်ဆေးပါ။
အမျိုးအစား ဆလင်ဒါဘက်ထရီ Pack ကို
အတိုင်းအတာ (T) ၁၈ မီလီမီတာ * (W) ၅၆ မီလီမီတာ * (L) 70mm or (T) 18mm * (W) 18mm * (L) 197mm
သံသရာဘဝ > = 500 Times က
အားသွင်းဗို့အားဖြတ်လိုက်ပါ 7.2V ± 0.025V
အားသွင်းဗို့အားဖြတ်လိုက်ပါ 0.0.6V ± 12.6V
max ကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စီးဆင်း 3C
လက်ရှိအားသွင်း max 3C
အလုပ်လုပ်အပူချိန် အားသွင်း:0~ 45â "Discharging: -20 ~ 60"
သိုလှောင်အပူချိန် အပူချိန်: -20 ~ 60âƒï¼ŒHumidity60±25ï¼
လက်မှတ် Pass ISO9001 Systemï¼Œ UL €UNã€CEãRoHSã€ REACH စသည်တို့ကို
အာမခံချက် ၁၂ လ
Monitor Lithium Battery ၏ထူးခြားချက်များ:
2. အရည်အသွေးအာမခံချက် - UL1642 ကိုစမ်းသပ်ခြင်းစံနှုန်းများအဖြစ်လက်ခံခြင်း။ နှင့်အားလုံးထုတ်ကုန် 100% ချောထုတ်ကုန်စမ်းသပ်သွားပါလိမ့်မယ်။
3. တည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်: သံသရာရှည်ဘဝ။ အဆပေါင်း ၅၀၀ ကျော်အဆက်မပြတ်အားသွင်းခြင်းနှင့်အားသွင်းခြင်းတို့ကိုထောက်ပံ့ပေးခြင်းသည်ဘက်ထရီပမာဏသည် ၈၀% ထက်မပိုစေပါ။
ထိခိုက်မှု၊ တုန်ခါမှု၊ အပ်စိုက်ကုထုံး၊ အပူချိန်မြင့်စသည့်အခြေအနေများတွင်ပေါက်ကွဲခြင်းမရှိခြင်း၊ ပေါက်ကွဲခြင်းမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ 18650 ဘက်ထရီအားလုံးတွင်ပေါက်ကွဲမှုများရှိသည်။ proof valves များနှင့်ပေါ်လီမာဘက်ထရီဆဲလ်များအားလုံးသည် colloidal electric ကိုအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အစွန်းရောက်ပတ်ဝန်းကျင်တွင်သာပေါက်ကွဲပြီးပေါက်ကွဲခြင်းမဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီသည်ထုတ်ကုန်လုံခြုံမှုနှင့်အရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်တိကျသောအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ရှိသည်။
Bluetooth နားကြပ်၊ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောစမတ်၊ GPS Navigator၊ POS စက်၊ စွမ်းအင်ဘဏ်၊ သင်ပုန်းသင်ယူခြင်း၊ ကားသွားလာမှု၊ MP3၊ MP4, MP5, စပီကာ၊ ကြိုးမဲ့မောက်စ်၊ လက်တော့ပ်၊ ကြိုးမဲ့စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးကိရိယာ၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ အမျိုးမျိုးသောတူရိယာများ၊ LED မီးခွက်များ၊ ယာဉ်အသွားအလာဆိုင်းဘုတ်များ၊ အိမ်သုံးအသေးစားအိမ်သုံးပစ္စည်းများ၊ DIY တူရိယာအမျိုးမျိုး၊ သတ္တုရှာဖွေစက်များနှင့်အခြားဒီဂျစ်တယ်ဘက်ထရီထုတ်ကုန်များ။
hot Tags:: Lithium Battery ကိုစိတ်တိုင်းကျတပ်ဆင်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ ပေးသွင်းသူများ၊ တရုတ်၊ စက်ရုံ
Beauty Device က 5000mAh Battery ပါ။
Beauty Device မှာ 2500mah Battery ပါပါတယ်။
လိပ်စာ: တရုတ်ပြည်၊ ရှန်ကျန်းပြည်နယ်၊ Baoan ခရိုင်၊
ဆေးဘက်ထရီ၊ POS စက်ဘက်ထရီ၊ စက်ရုပ်ဘက်ထရီ သို့မဟုတ် စျေးနှုန်းစာရင်းနှင့် ပတ်သက်၍ စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက သင့်အီးမေးလ်ကို ကျွန်ုပ်တို့ထံ ထားခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံ 24 နာရီအတွင်း ဆက်သွယ်ပေးပါမည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်မြင့်မားသောကုန်ကျစရိတ်နှင့်စွမ်းဆောင်ရည်စွန့်လွှတ်မှုကုန်ကျစရိတ်ဖြင့် lithium-ion ဘက်ထရီ၏အပူချိန်နိမ့်စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးတက်စေရန် electrolyte နှင့် electrode တို့ကိုချိန်ညှိရန်လိုအပ်ပါသည်။
lithium ion battery နှင့်နီးကပ်စွာလေ့လာပါ
Lithium ion battery သည်အားပြန်သွင်းနိုင်သည့် battery အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အပေါင်းနှင့်အနှုတ်လက္ခဏာ electrodes အကြားရွေ့လျားနေသော lithium ion ပေါ်တွင်အဓိကမူတည်သည်။ အားသွင်းခြင်းနှင့်ဆေးကြောခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်တွင်၊
မူပိုင်ခွင့်© 2021 Shenzhen Hi-Chipcom Electronics Co. , Ltd ။ - ဆေးပစ္စည်းကိရိယာဘက်ထရီ၊ POS စက်ဘက်ထရီ၊ စက်ရုပ်ဘက်ထရီ - All rights reserved ။
လျ:+86-755-81451866E-mail ကို:[email protected]